एभीसी सेन्ट्रल जोन : अन्तिम टोलीको घोषणा, ३ नयाँ खेलाडी! | Hamro Khelkud
एभीसी सेन्ट्रल जोन : अन्तिम टोलीको घोषणा, ३ नयाँ खेलाडी!
एभीसी एसियन सिनियर मेन्स सेन्ट्रल जोन भलिबल प्रतियोगिताको लागि नेपाली राष्ट्रिय भलिबल टोलीको अन्तिम छनोट भएको छ । प्रशिक्षक हान एबिङले बिहीबार प्रशिक्षणका क्रममा बाहिरिने खेलाडीलाई टोली छनोटबारे जानकारी दिएका छन् । यद्यपि संघले भने आधिकारिक घोषणा गर्न बाँकी रहेको छ ।
यसपटक छनोटमा ३ नयाँ खेलाडी समावेश भएका छन् । राजेन्द्र विष्ट, दुर्गा खड्का र टेकराज अवस्थी पहिलो पटक टोलीमा परेका हुन् । यसअघि छनोटमा २५ खेलाडीबाट १८ खेलाडीको नामावली सार्वजनिक गरिएको थियो । १८ जनाबाट राजु शेरचन, दुर्गा महतो, सरन सामरी र द्वारिका थापाले अन्तिम चरणमा स्थान बनाउन सकेनन् ।
नेपाल भलिबल संघको आयोजनमा यहि भाद्र २ देखि ७ गतेसम्म एभीसी एसियन सिनियर मेन्स सेन्ट्रल जोन भलिबल प्रतियोगिता हुँदैछ । लगनखेलस्थित आर्मीको कभर्ड हलमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा नेपालसहित ७ राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । आयोजक नेपालसँगै साविक विजेता तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, माल्दिभ्स, किर्गिस्तान र बंगलादेशले यस प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनेछन् ।
एभीसी एसियन मेन्स सिनियर सेन्ट्रल जोन प्रतियोगिताको सम्पूर्ण खेल हाम्रो खेलकुद डट कमको युट्युबमा प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ । आजै हाम्रो खेलकुद डट कमको युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला ।
युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न यहाँ थिच्नुहोस्
नेपालले हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल प्राप्त गरेको एकमात्र पदक यसै प्रतियोगितामा हो । माल्दिभ्समा यसअघि आयोजित प्रतियोगितामा नेपाल तेस्रो भएको थियो । यसपटक नेपाली टोली उक्त सफलतालाई सुधार गर्नेलक्ष्यसहित प्रशिक्षणमा छ । टोलीको प्रशिक्षण डच प्रशिक्षक हान एबिङले सम्हालेका छन् । नेपाली टोली विगत डेढ महिनायता प्रशिक्षणमा छ ।
कप्तान ईम राना
कुलबहादुर थापा (पुलिस)
ईमबहादुर मगर (कप्तान) (पुलिस)